UCHWEPHESHE WEPOLE YEBHANELA
I-Weihai Wisezone Outdoor Equipment Co., Ltd. (I-Weihai Wisezone Display Equipment Co., Ltd.) iyinkampani esunguliwe enesipiliyoni seminyaka engu-17, egxile embonini yokukhangisa ebonakalayo yesigxobo sefulegi/ isigxobo sesibhengezo kanye nemishini yokubonisa ephathekayo.
I-Weihai Wisezone inkampani yokuqala e-China esebenzisa izinto ezihlanganisiwe zekhabhoni ukwenza izigxobo zebhena ezindizayo kusukela ngo-2005. Akuyena umkhiqizi wokuqala wesibhengezo esindizayo emhlabeni, kodwa siyithuthukise kangcono kuneyasekuqaleni futhi sakha imboni yesibhengezo esiyinhlanganisela yekhabhoni. Izigxobo zaseShayina futhi zingabanye babakhi beZinga bemboni abakhulu bezigxobo ze-carbon composite / fiberglass.
Ngentshisekelo yethu yokuqamba izinto ezintsha, ithimba lethu le-R&D lilokhu lithuthukisa imikhiqizo emisha minyaka yonke.Sibe nezinto ezinelungelo lobunikazi ezingaphezu kwe-10 njenge-multi-functionisisekelo samanzi,Isistimu yesigxobo sefulegi ye-4in1, ubhaka street flagobekuyizinto ezidumile emhlabeni wonke futhi ezilandelwa abanye.
Futhi samukela isicelo somuntu ngamunye futhi sikwakhela wena kuphela imikhiqizo ye-OEM/ODM.
Siyayikhathalela indawo ezungezile kanye nabasebenzi bethu, siphumelele i-Ethical Audit futhi siyilungu le-SEDEX
Sisebenze nezinkampani eziningi ezihamba phambili zokuphrinta amafulege, ukubonisa nokusayina abangenisa kwamanye amazwe/basabalalisi emazweni angama-70 emhlabeni jikelele.
Ingabe ufuna ukubambisana nomkhiqizi onokwethenjelwa ngokuqondile?pls zizwe ukhululekile xhumana nathi, ama-Wzrods awakaze akudumaze.
Sihlala sisebenzela ukuthuthukisa ukukhiqizwa kwethu yi-Lean Management, engavumela ukukhiqizwa kwethu ukuthi kuguquke kakhulu ngesikhathi esifushane, izigxobo ze-Ever 12000pcs ezinsukwini eziyi-12.
Ukunethezeka, isisindo esincane namandla aphezulu yizici zezigxobo zethu zefulegi eliyinhlanganisela yekhabhoni.Iwaranti yeminyaka emi-3 kuzo zonke izigxobo zethu ezijwayelekile, okuye kwafakazelwa ukuthi zisaphila ngaphansi160km/h ukuhlola isivinini somoyae-Italian Wind Tunnel Lab.
Ikhwalithi yegolide, Isikhathi esifushane sokuhola, intengo enengqondo, imikhiqizo e-Eco-friendly kanye nentsha isenza abaholi kulo mkhakha.Izinkampani Zokuphrinta ezihamba phambili emhlabeni, imikhiqizo kanye nabangenisa kwamanye amazwe;abasabalalisi bemishini yokubonisa bakhetha ukusebenza nathi.